Saxaafadda Isbaanishka ayaa tuurtay bambaanadan markii uu Messi ka tagay PSG - teles relay
Telefishinka Isbaanishka "El Chiringuito" ayaa shaaca ka qaaday Isniintii in kulan ay yeesheen usbuucii la soo dhaafay aabaha dhalay Lionel Messi iyo hogaamiyaasha PSG iyagoo doonaya inay la soo saxiixdaan xiddiga reer Argentina kooxda caasimada Faransiiska. .
Waxaan xasuusnaa in xiddiga reer Brazil ee Neymar uu dhawaan warbaahinta u shaaciyey, ka dib guushii PSG ee Old Trafford inuu jeclaan lahaa inuu dib ula ciyaaro Messi: Waxaan jeclaan lahaa inaan markale la ciyaaro Messi. Tani waa waxa aan aad u doonayo. Waan u ogolaan lahaa inuu ii ciyaaro, ma jiraan wax dhibaato ah (qosol). Waxaan doonayaa inaan markale la ciyaaro isaga, hubaal. Waa inaan sameynaa sanadka soo socda ”, ayuu bilaabay.
Hadal buuq badan ka dhex abuuray Catalonia, gaar ahaan markaan ogaano in bixitaanka laacibka reer Argentine ee dhamaadka qandaraaskiisa bisha June ee soo socota ay wali quseyso kooxda reer Catalan.
Hogaamiyaasha Barça uma muuqdaan kuwo diyaar u ah inay iska daayaan lixda jeer Ballon d'Or. Josep Maria Bartomeu wuxuu ka horyimid dhamaadka ogolaanshaha rabitaanka bixitaanka Messi.
Hadii ay ahaan laheyd saxaafada, Manchester City waxay aheyd kooxdii umuuqatay tan ugufiican ee soo dhaweyn doonta kabtanka Barcelona, ​​PSG ayaa hada ah kooxda ugu cadcad, inkasta oo xaalada dhaqaale ee adag ay kujirto kooxda caasimada.
Sida laga soo xigtay barnaamijka El Chiringuito, Jorge Messi, aabaha iyo wakiilka lambarka 10-aad ee Barcelona, ​​ayaa ka qeyb geli lahaa kulan ka dhacay qunsuliyada Qatar iyadoo la doonayo in Lionel Messi lala saxiixdo kooxda heysata horyaalka Faransiiska. ee Sexta oo hubinaya taas Xiriirka ka dhexeeya Messi, Qatar iyo PSG ayaa sii kordhaya. iyo in wada hadaladu ay ahaayeen kuwa aad u saxan.
Aayaadka oo si cad aan loo ogaan. In badan oo ay ku riixeen Jorge Messi inuu ka soo baxo kaynta si uu uga horyimaado diidmada. "Been, ikhtiraac cusub", wuxuu ku qoray sheeko Instagram ah, isagoo qeexaya: Waxaan ku sugnaa Argentina tan iyo bishii Sebtember. ” Dhamaantood waxaa weheliya hal kudhig ah "#fakenews".